इस्लाम र मुस्लिम समुदायको बारेमा रोचक
तपाईंले सोध्नुभयो: इस्लामिक राष्ट्रहरू कति इस्लामिक छन्?
श्रेणी: धर्मशास्त्र 0
संसारको सबैभन्दा राम्रो इस्लामिक राष्ट्र कुन हो? कुनै देशमा सबैभन्दा ठूलो मुस्लिम जनसंख्या इन्डोनेसियामा छ, जुन विश्वका मुस्लिमहरूको १२.७% बसोबास गर्ने देश हो,…
कुन सही हो ईद उल अधा वा ईद उल अधा ?
ईद-उल-अधालाई इद-उल-अधा वा ईद-उल-अधा पनि हिज्जे गर्न सकिन्छ। यसलाई प्रायः ईद भनिन्छ। यद्यपि, ईदले अर्को चाड, ईद-उल-फित्रलाई पनि सन्दर्भ गर्न सक्छ, जुन…
उत्तम उत्तर: इस्लामले प्रशंसाको बारेमा के भन्छ?
इस्लाममा कसैले तपाइँको प्रशंसा गर्दा तपाइँ के भन्नुहुन्छ? जे भए पनि, यदि कसैले तपाईंको प्रशंसा गर्न चाहन्छ भने, केवल धन्यवाद भन्नुहोस्, साथै "अल्हमदुलिल्लाह" भन्नुहोस् (सबै प्रशंसा ...
द्रुत उत्तर: सिरका हलाल वा हराम?
द्रुत जवाफ: वाइन भिनेगर र बाल्सामिक भिनेगरलाई हराम मानिन्छ किनभने तिनीहरूमा पर्याप्त मात्रामा रक्सी हुन्छ। अन्य सबै प्रकारका सिरकालाई हलाल मानिन्छ। छ…
कुरान मा चन्द्रमा कति पटक उल्लेख छ?
के कुरानमा चन्द्रमाको उल्लेख छ? कुरानले जोड दिन्छ कि चन्द्रमा ईश्वरको चिन्ह हो, आफैंमा ईश्वर होइन। अल्लाहले चन्द्रमाको बारेमा के भन्नुभयो?…
इस्लामको स्वर्ण युगले कुन प्रगति गर्यो?
वैज्ञानिकहरूले बीजगणित, क्यालकुलस, ज्यामिति, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान, चिकित्सा, र खगोल विज्ञानको क्षेत्रहरू अगाडि बढाए। इस्लामी स्वर्ण युगको समयमा कलाका धेरै रूपहरू फस्ट्यो, सिरेमिक, धातुको काम, कपडाहरू, प्रबुद्ध…
निजाम शिया थिए कि सुन्नी ?
पूर्व हैदराबाद राज्यका शासक असफ जह (निजाम) सुन्नी मुस्लिम भएता पनि उनीहरूले मुहर्रमको पालनालाई निरन्तर संरक्षण दिए। यो तिनीहरूको समयमा थियो कि विशेष उपनिवेशहरू ...
तपाईको प्रश्न: काबा किन मूर्ति होइन?
हामी मुस्लिमहरू मक्कामा मूर्ति पूजा गर्दैनौं। हामी यसलाई आइडल पनि भन्दैनौं। यो मक्का मा पैगम्बर मोहम्मद द्वारा लगाइएको एक ढुङ्गा हो मुख्य उद्देश्य ...
द्रुत उत्तर: कुरानले पत्नीको अधिकारको बारेमा के भन्छ?
पवित्र कुरान (SWT) मा अल्लाहले पत्नीलाई दाइजोको अधिकारको बारेमा बताउनुभएको छ। “र महिलाहरूलाई उनीहरूको दाइजो उपहारको रूपमा दिनुहोस्। त्यसपछि, यदि तिनीहरू हुन् ...
बारम्बार प्रश्न: कुन दुई नेताहरूले 1803 मा ओटोम्यानहरूबाट पवित्र शहर मक्का लिनको लागि लडे?
तिनीहरू 1744-1745 मा नेजदको दिराइयामा धार्मिक आन्दोलनको रूपमा उठेका थिए। तिनीहरूको सिद्धान्तले हेजाजमा केही सहानुभूतिहरू फेला पारे, र मक्काका मुफ्तीहरूले घोषणा गरे ...
12... 837 अर्को
सबैको दिन शुभ रहोस्! मेरो नाम आमिर हो। यो इस्लाम र इस्लामिक संसारको बारेमा मेरो ब्लग हो। मेरो ब्लगमा धर्मको दृष्टिकोणबाट इस्लामको बारेमा लेखहरू हुनेछन्, साथै अन्य विज्ञानहरू जस्तै धार्मिक अध्ययन, समाजशास्त्र, सांस्कृतिक अध्ययन, भाषाविज्ञान, इत्यादिको दृष्टिकोणबाट।
के म रमजानको लागि मेरो घर सजाउन सक्छु?
बैंक इस्लाम कसरी DuitNow प्रयोग गरिरहेको छ?
मस्जिदलाई मस्जिद के बनाउँछ?
इस्लाम को द्रुत प्रसार को कारण के कारकहरु?
इस्लामका दुई शाखाहरू के हुन्?
के लटरी टिकट किन्नु इस्लाममा हराम हो?
सबै भन्दा राम्रो जवाफ: यदि तपाईं टाउको हुनुहुन्छ भने हिजाब लगाउनु पर्छ?
अधिकार धारकहरूलाई ध्यान दिनुहोस्! साइटमा पोस्ट गरिएका सबै सामग्रीहरू सूचना र शैक्षिक उद्देश्यका लागि सख्त रूपमा हुन्! यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि कुनै पनि सामग्रीको पोस्टिङले तपाइँको प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गर्दछ, सम्पर्क फारम मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्न निश्चित हुनुहोस् र तपाइँको सामग्री हटाइनेछ!